अभागी अर्जेन्टिना, अभागी मेसी!
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कहलिएको नाम हो – लियोनल मेसी र उनको देश अर्जेन्टिना। कुनै देश वा कुनै खेलाडीका संसारभर धेरै फ्यान छन् भने त्यो देशमा अर्जेन्टिना र खेलाडीमा मेसीलाई छुटाउन मिल्दैन।
राष्ट्र र क्लबप्रति सधैँ इमान्दार रहे मेसी
११ वर्षको उमेरका स्पेन आएका मेसीलाई सन् २००४ मा स्पेनको २० वर्ष मुनिको टिमबाट खेल्ने अफर आएको थियो तर उनले अर्जेन्टिनाबाट नै खेल्ने बताए। २००५ मा उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले
मेसी पेनाल्टीमा चुक्दा चिलीलाई दाेस्राे पटक काेपा अमेरिकाकाे उपाधि ।
लगातार दोस्रो पटक अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै चिलीले कोपा अमेरिकाकाे उपाधि जितेको छ । नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान भएको खेलमा र्निधारित र अतिरिक्त दुवै समयमा गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी
युरो प्रिक्वाटरफाइनलका आज तीन खेल, कसको सम्भावना कस्तो..?
फ्रान्समा जारी युरो २०१६ अन्तर्गत आज प्रिक्वाटरफाइनलका तीन खेलहरू हुनेभएका छन्। आइतबार राति हुने पहिलो खेलमा आयोजक फ्रान्स र आयरल्याण्ड दोस्रो खेलमा जर्मनी र स्लोभाकिया तथा अन्तिम खेलमा हंगेरी र
युरोकपमा वेल्स बन्यो भाग्यमानी, पोल्याण्ड र पोर्चुगल पनि क्वार्टरफाइनलमा
पोल्याण्ड, पोर्चुगल र वेल्स युरोकप २०१६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार राती भएको खेलमा पोल्याण्डले स्वीट्जरल्याण्ड, पोर्चुगलले क्रोयसिया र वेल्सले उत्तरी आयरल्याण्डलाई हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित
भारतलाई हराउँदै नेपाल फुटभली च्याम्पियन
काठमाडौं, ११ असार । तेस्रो दक्षिण एसियाली मैत्रीपूर्ण फुटभली च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतलाई २–० ले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको छ । टोखास्थित भूतखेल मैदानमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले ‘वेष्ट अफ थ्री’को
नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरुलाई अर्को सफलता
काठमाडौं, ९ असार । नेपाल भारोत्तोलन संघको आयोजनामा असार ५ र ७ गते संचालित पाँचौं नेशनल ग्रान्डप्रिक्स भारोत्तोलन प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीले सफलता हासिल गरेका छन् । प्रतियोगिताको ८५ केजी तौलतर्फ
कोपा अमेरिका फुटबल उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र चिलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने
एजेन्सी । जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र चिलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने तय भएको छ । यी दुई टोलीले अघिल्लो संस्करणको फाइनलमा पनि यि दुईबीच नै खेल
युरोकप २०१६ मा कुन देशको कति अङ्क र को परे समुहको पहिलो स्थानमा ? हेर्नुहोस नयाँ तालिका
स्पेनको अपराजित यात्र समाप्त,पायो इटालि प्रतिद्धन्दी
एजेन्सी । युरोपमा अहिले चलिरहेको मिनि वल्ड कप भनेर चिनिने युरो कप २०१६ को समूह चरणमा साविकको विजेता स्पेन क्रोएसियासँग पराजित हुदाँ अन्तिम १६ मा इटली प्रतिद्वन्द्वी पाएको छ ।